Jim Alvino Siqu Coaching - Jim Alvino
Umyalezo Personal kusuka uDkt. Jim Alvino "Yakho Law of Attraction Business Umqeqeshi"
"Gcwele ntu yimpumelelo - futhi ngaphandle kokukhetha labo esesikwenzile ubukhulu - babe noma kuye kwadingeka abaqeqeshi ezimpilweni zabo ukushukumisa, idrayivu, afundise futhi elungile ... Uma ucabanga ungakwazi ukukwenza sisodwa uku oyisiwula, bezikhukhumeza bese kokudumazeka. "- UDkt. Jim Alvino
Umbhali kanye Billionaire Ken Fisher encwadini yakhe, Eziyishumi Imigwaqo ukuba nezeNgcebo, izinkulumo mayelana nendlela abacebile efika khona, nokuthi unga kakhulu. Njengoba kungenzeka ukuthi wena acabanga, akukho endleleni eyodwa nje, kodwa kukhona hhayi engamakhulu noma.
Kulaba Fisher eziyishumi ukhuluma, lokho ushayela me, njengoba Umthetho Wakho of Attraction Business Umqeqeshi, uyakusiza ukubona niche yakho, uthando lwakho, umqondo wakho wokudala ... ke ukwakha imodeli yebhizinisi ngalo ungakwazi ukuheha nokubonisa fortune yakho. Kulula.
Njengoba Ngithi encwadini yami, Umhlahlandlela Explorer sika kuya Law of Attraction, INHLOSO yami iwukuthuthukisa ingxoxo jikelele ukuthi Consciousness kudala konke, ukuthi ARE ukuthi Consciousness, futhi ukuthi aba namandla futhi enesibopho ukudala ukuphila kwethu, ikusasa lethu futhi ikusasa lethu ...
UMGOMO yami ukuvusa lelo qiniso wonke umuntu ngingathinta.
Malcolm Gladwell encwadini yakhe Outliers ukhuluma mayelana 10,000 ihora umthetho - ukuthi kuthatha isikhathi eside ukufinyelela ekuphakameni umdlalo komuntu inikezwe isipiliyoni esifanele, ukuqeqeshwa, futhi, yebo, ngisho impi izibazi. Ziningi gurus self-wamemezela ensimini abazikhethele noma ubizo. Bambalwa babe isimangalo kweqiniso waduma. Ngiye ngemvume izinkulungwane zamahora langempela coaching imihlangano nge inqwaba amaklayenti kusuka emhlabeni wonke.
Futhi nakhu Ngazi: Kungakhathaliseki uthando lwakho kuyinto bokusungula kakhulu (USocrates aqeqeshe uPlato, UPlato aqeqeshe u-Aristotle), kuhilela ubuciko noma athletics kokwenza, umqeqeshi ebona futhi abanolwazi lubaluleke eqondisa protégé ubukhulu yakhe kwangaphakathi futhi yangaphandle.
Kwadingeka umqeqeshi football e junior esikoleni esiphakeme owakhuthaza nathi ngesikhathi halftime nale: "Abafana, uma ufuna touchdown kufanele ucabange touchdown. Uma kuphela ucabanga amayadi angu ezinhlanu, yilokho uya uthole. "Lokho engqondweni aningishiyanga. Kusukela ngaleso sikhathi ngiye kwadingeka abaqeqeshi umculo, ngokubhala abaqeqeshi, karate abaqeqeshi, abaqeqeshi ibhizinisi, abaqeqeshi ukukhuluma, ukucabanga abaqeqeshi, yoga nokuzindla abaqeqeshi ... uhlu kuqhubeka.
futhi namhlanje, phakathi abaqeqeshi bami, Ngihlukunyezwa wafundiswa ngu umngane wami engimthandayo Amit Goswami, theory quantum physics kanye umsunguli we Centre for Quantum Zokulwisana ... Umqeqeshi wami quantum physics! "Quantum" yigama buzz ezinjalo namuhla - yonke into kusukela ukupheka quantum ukuba quantum isevisi ye-Inthanethi - iye yasetshenziswa, kabi futhi kuyehla kube nje ukumaketha ibinzana, kodwa bambalwa abantu abe inkomba esisiza siqonde ukuthi basuke bekhuluma nge.
Futhi Manje Yithuba lakho…
Ukuze unqume ukuthi ufuna touchdown noma amayadi angu emihlanu nje, ukunquma ukuthi sekuyisikhathi esifanele ngawe ukusheshisa ukuphila kwakho futhi ibhizinisi lakho ngokusebenzisa impumelelo yomuntu siqu kanye / noma Business Coaching. Iqiniso liwukuthi, akusiwona indaba yokuthi uma, kodwa UMA futhi UBANI uyobe ukhethe ukuthatha wena izinga lakho elilandelayo ... noma engase ibe ngawe. Wena Khetha!
"Inzuzo Ingabe Ingcono Ulwa"
Kungenzeka ukuthi kwakuyingubo enkulu American ibhizinisi sefilosofi Jim Rohn okwakuphume nje ngiqala ukuwuzwa ukhala ibinzana, "Inzuzo bangcono inkokhelo." Ngangazi ukuthi lokhu ngokuphelele ukuphila kwami ​​konke. Besingakafiki umzila iphepha Kwadingeka njengenhlangano aphansi kid esikoleni, le "sobuciko" ibhizinisi njengoba ingane, amakilasi ikarati engangifundisa ekolishi umphakathi, Consulting zami eziqinile [James Alvino & Associates] eyasungulwa ngo 1990 ngaphezulu ME kuka guy isibhakela esiyisaga isikhathi sewashi nje ukuze siziphilise?
Njengabaningi wena, Ingihlabe khona, futhi wakwenza lokho, eyakhelwe iphupho somunye umuntu ngezithukuthuku ngingedwa. Hey, kodwa ngiyazi ukuthi ukuze asizakale futhi parley. Ngakha i ubuchwepheshe kakhulu ukuhlela amasu kanye zokudala yekusombulula inkinga (CPS); ayalolongwa ukuqeqeshwa kwami, isethulo, nokuxhumana amakhono; futhi bahlakulele uthando ukuze ashaye phandle ngingedwa - obaziyo, wami ujike manje, isiqeshana engangikwazi The Dream American.
Ngakho manje sekuyithuba YAKHO kakhulu! Kuyinto akukephuzi kakhulu ukuba uqale, kodwa ngaso sonke isikhathi sekwephuze kakhulu ukuba kunganikezwa ulinde ... futhi uma ulinde, ungase ulinde kuze kube phakade.
Uma udinga ukwazi lozalo yami, nakhu: Ngathola iseluleko "abampofu likababa" a la Robert Kiyosaki, ithole imiphumela emihle yokuhlolwa, waya esikoleni esingcono, ithole degrees esibulalayo (Ph.D. kuyifilosofi from Boston College), futhi kubekwe ukwenza uphawu yami emhlabeni.
Bengilokhu ngiwuhlobo ufinyelele nge ukuphishekela enamandla ubuhle. Ukusebenzisa le nkulumo evamile, "Yiba Kuhle Yakho Esithombile Manje,"Self yami Kuhle esikoleni esiphakeme kwaba Kuhle Athlete, ekolishi Kuhle Honours Student, esikoleni Grad Kuhle Ph.D. Umamukeli, kwezamabhizinisi Kuhle uMongameli Inkampani, CEO Kuhle izinkampani ezintathu, njengendlela umlobi Kuhle Sikhungo Intatheli (izincwadi eziningi futhi imiklomelo), futhi njengoba i usomabhizinisi, I usomabhizinisi Kuhle I Can Be!
Esinye sezifundo enkulu engake ngafunda ekhaya, kusukela ubaba, kwaba ukuphikelela nokukhuthazela. Impumelelo akuyona Sprint kodwa webanga. Azikho ukwehluleka, izifundo kuphela. I ingilazi awuyona ingxenye ezingenalutho noma isigamu ngokugcwele, it is zichichima kungenzeka futhi ithuba. Ngingumfana uyakuthanda ecaphuna Wayne Gretzky, "Wena miss 100% kuqhume khona isibhamu ungathathi. "Thatha le shot!
Ingabe Qualify ngoba Omunye wami Izıthwebulo VIP Coaching Izinhlelo? Chofoza lapha ukuthola.
7 Izimiso Zokwakha Ingqondo Enganqobeki
Lokho Kuzoqinisekisa Impumelelo Yakho!
Imithetho emine ye-Universal
Izimiso Ezisemqoka Zengqondo
Iziqinisekiso ukusiza ukuthuthukisa i-mindset yakho
Izimiso Eziyisithupha Zokwakha Ingcebo
Yini enikeza Umthetho Wokuheha Its Juice?
Faka igama lakho nekheli le-imeyili elingezansi ukuthola ikhophi lakho MAHHALA
"The Law of Quantum Observation: Indlela Bheka futhi Ukukhanga Amathuba More for Personal Growth and Prosperity"